August 12, 2020 - Bahuthutagabar
ဆယ်တန်းအောင်မြင်သည့် ညီဖြစ်သူအား အဝေရာဆည်သို့ လိုက်ပို့ရင်း ဆယ်လ်ဖီဆွဲရာမှ ညီအကိုနှစ်ယောက်သေဆုံး
ဆယ်တန်းအောင်မြင်သည့် ညီဖြစ်သူအား အဝေရာဆည်သို့ လိုက်ပို့ရာမှ ဆည်အတွင်းပြုတ်ကျကာ ညီအကိုနှစ်ယောက်သေဆုံး ၂၀၁၉၊ ၂၀၂၀ တက္ကသိုလ်ဝင်တန်းစာမေးပွဲအောင်မြင်သည့် ညီဖြစ်သူအား ပျဉ်းမနားမြို့နယ်အတွင်းရှိ အဝေရာဆည်သို့ အလည်လိုက်ပို့စဉ် ညီဖြစ်သူကဆည်အနီးရှိ ကျောက်တုံးပေါ်တက်၍ ဖုန်းဖြင့် ဆဲ ဖီလ် ရိုက်ရာ ခြေချော်၍ ဆည်အတွင်းပြုတ်ကျခဲ့သောကြောင့် အကိုဖြစ်သူက ကယ်ဆယ်ရာ ညီအ ကိုနှစ်ဦးလုံး […]
မိခင်ဖြစ်သူ ဈေးရောင်းစားနေရတယ်လို့ အပုပ်ချနေသူတွေကို ပြန်ဖြဲလိုက်တဲ့ “ဇေရဲထက်”….
ပရိသတ်တွေ ချစ်ကြတဲ့ မင်းသားချော ဇေရဲထက်ကတော့ ဗီဒီယိုဇာတ်ကားတွေ ခေတ်ကောင်းစဉ် အခါက် ဇာတ်ကားတွေကို လက်မလည်အောင် ရိုက်ကူး ခဲ့တဲ့ မင်းသားတစ်လက်ပဲ ဖြစ်ပါတယ် ဇေရဲထက်က အခုဆိုရင် ဇာတ်ကားတွေ မရိုက်ကူးဖြစ်တော့တာ (၃)နှစ်နီးပါး ရှိနေပြီဖြစ်ပေမယ့် သူ့ရဲ့ ပရိသတ်တွေနဲ့ အဆက်အသွယ် မပြတ်ရှိနေဆဲ ဖြစ်ပါတယ်။ သူ့ရဲ့ […]
“တရုတ်ကတော့ ပေါ်တင်ပဲ မြန်မာပိုင်နက်ထဲက ချီဗွေမြို့နယ် ခလူးခကျေးရွာနားမှာ သလင်းကျောက်ကို တရားမဝင် လာတူးနေတာ တရားဝင်တူးနေသလား မှတ်ရတယ်”
“တရုတ်ကတော့ ပေါ်တင်ပဲ မြန်မာပိုင်နက်ထဲက ချီဗွေမြို့နယ် ခလူးခကျေးရွာနားမှာ သလင်းကျောက်ကို တရားမဝင် လာတူးနေတာ တရားဝင်တူးနေသလားမှတ်ရတယ်” တရုတ်ကတော့ ပေါ်တင်ပဲ မြန်မာပိုင်နက်ထဲက ချီဗွေမြို့နယ်၊ ကန်းဖန့်ကျေးရွာအုပ်စု၊ ခလူးခကျေးရွာနားမှာ သလင်းကျောက်ကို တရားမဝင် လာတူးနေတာများ မသိရင် တရားဝင်တူးနေသလား မှတ်ရတယ်၊ စက်ယန္တယားအစုံနဲ့ ပြည်နယ်အစိုးရ၊ သတ္တုတွင်းဝန်ကြီးဌာနနဲ့ နယ်လုံဝန်ကြီး […]
“ပုရိသတွေကို ချက်ချင်းဆိုသလို မှင်သက်ငေးမောသွားစေတဲ့ Mဆိုင်းလု ရဲ့ ကကွက်ဆန်း”(ရုပ်သံဖိုင်)
“ပုရိသတွေကို ချက်ချင်းဆိုသလို မှင်သက်ငေးမောသွားစေတဲ့ Mဆိုင်းလု ရဲ့ ကကွက်ဆန်း”(ရုပ်သံဖိုင်) တစ်နေ့တခြားပိုပိုလှလာတာ ကတော့ Mဆိုင်းလုရဲ့ အားသာချက်တစ်ခုပါပဲ။ ပျော်ပျော်နေတတ်ပြီး သူငယ်ချင်းတွေနဲ့လည်း မကြာခဏဆိုသလို အတူတူ ခရီးထွက်တတ် ပါသေးတယ်။ ဒီတစ်ခေါက် ဗီဒီယိုလေးကတော့ ပုရိသတွေရော ပျိုမဒီလေးတွေပါ တဖြုတ်ဖြုတ် ကြွေရလောက်အောင် မိုက်လွန်းတာမို့ ပြန်လည် တင်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ်။ […]
Memory တွေ ပြန်တက်လာလို့ ပီတိဖြစ်လို့ တင်တာပါဆိုတဲ့ ယုန်လေး
အခုဗီဒီယိုလေးကို Memory တွေ ပြန်တက်လာလို့ ပီတိဖြစ်လို့ တင်တာပါဆိုပြီး ကိုယုန်လေးက တင်ထားတာပါ မြင့်မြတ်ကတော့ ပရိသတ်တွေရဲ့ ချစ်ခင်အားပေးမှုကို အခိုင်အမာရရှိထားခဲ့သူလေးပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ မြင့်မြတ်ကတော့ သဘာဝကျတဲ့ ဇာတ်ရုပ်တွေ ပီပြင်တဲ့ သရုပ်ဆောင်ပုံတွေကြောင့် အကယ်ဒမီဆုတွေကို ဆွတ်ခူးနိုင်တဲ့အထိအောင်မြင်နေတဲ့ အနုပညာရှင်တစ်ယောက်ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ပရိသတ်တွေအားကျချစ်ခင်နေရပြီး အေးချမ်းတဲ့ […]
သင်ရွေးချယ်လိုက်တဲ့ ကောင်မလေးတစ်ယောက်က သင့်ရဲ့အကြောင်းကို ပြောပြပါလိမ့်မယ်….
လူတွေရဲ့ ပင်ကိုယ်စရိုက်နဲ့ ထူးခြားတဲ့အမူအကျင့်တွေဟာ အမြဲတည်ငြိမ်မနေဘဲ ‌ပြောင်းလဲတတ်ကြပါတယ်။ ဒါပေမယ့်လည်း သေးသေးမွှားမွှားအရာလေးတွေကနေတောင် သင်ဟာ ဘယ်လိုလူစားမျိုးလဲဆိုတာ ဖော်ပြနိုင်ပါတယ်။ အလှအပစံနှုန်း သတ်မှတ်ချက်တွေမပါဘဲ ပုံမှာဖော်ပြထားတဲ့ အမျိုးသမီး ၅ ယောက်က သင့်ဘက်ကို လှည့်လာခဲ့မယ်ဆိုရင် ဘယ်သူက ဆွဲဆောင်မှုအရှိဆုံး ဖြစ်မလဲဆိုတာ စိတ်ကူးယဉ်ကြည့်ပြီး သင့်ရဲ့ခံစားချက်နဲ့ ရွေးချယ်ကြည့်လိုက်ပါ။သင့်ရဲ့ရွေးချယ်မှုကနေ သင့်ရဲ့ […]
ရိုးသားမှုကဆင်းရဲတာချမ်းသာတာနဲ့မဆိုင်ဖူးဗျ စိတ်ဓာတ်နဲ့ပဲဆိုင်တယ်…….. ဒီနေ့အင်းစိန် ကညနမှာ ကားလိုင်စင်ဝင်တာ။ အကျိုးတော်ဆောင်နဲ့ လုပ်တော့နားနေဆောင်မှာအေးရာအေးကြောင်းfbသုံးနေတာ။ အဲ့ဒီအချိန်မှာ ပုံထဲက အကျီအဖြူနဲ့ အမျိုးသမီးဝန်ထမ်းဟုတ် ဟန်တော့မတူ အကျိုးဆောင်လားပဲ။ ပိုက်ဆံရှစ်သိန်းကျော်ကောက်ရတာ။ ဘယ်သူဟာလဲေ အ်ာမေးနေတယ်။ နားနေဆောင်က လူတွေလဲေ မာ့ကြည်ကြပေါ့။ ပြီးတော့ ခပ်လှမ်းလှမ်းက အမျိုးသမီး […]
နတ်ကောင်းနတ်မြတ်တွေက သင့်ကို စောင့်ရှောက်တယ်ဆိုတာ သိနိုင်မယ့်အချက် (၅) ချက်…
နတ်ကောင်းနတ်မြတ်တွေက သင့်ကို စောင့်ရှောက်တယ်ဆိုတာ သိနိုင်မယ့်အချက် (၅) ချက် တစ်ချို့လူတွေဟာ သူတို့ရဲ့ မွေးရာပါကံလို့ပဲပြောရမလား၊ ထူးခြားချက်လို့ပဲပြောရမလား (အကြောင်းအမျိုးမျိုးကြောင့်) နတ်ကောင်းနတ်မြတ်တွေရဲ့ စောင့်ရှောက်ခြင်းကို အမြဲတမ်းခံရပါတယ်။ သင့်ကိုနတ်ကောင်းနတ်မြတ်တွေက စောင့်ရှောက်တယ်ဆိုတာ သိနိုင်မယ့်အချက် (၅) ချက်ရှိပါတယ်။ တကယ်လို့ ဒီအရာလေးတွေကို သင်အမြဲလိုလို ကြုံတွေ့နေရတယ်ဆိုရင်တော့ သင်ဟာ မမြင်ရတဲ့ […]